Nehemia – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Nehemia
1:1 Ny tenin'i Nehemia, ny zanak'i Hakalia. Ary nony fa, tamin'ny volana Kisleo, tamin'ny taona faharoa-polo, Tany an-drenivohitra Sosa.
1:2 ary Hanany, iray tamin'ireo rahalahiko, tonga, izy sy ny lehilahy amin'ny Joda ny sasany. Ary nanontany azy ny momba ny Jiosy izay sisa ka dia tavela avy any amin'ny fahababoana, ary ny momba an'i Jerosalema.
1:3 Ary hoy izy ireo tamiko: "Ireo izay naharitra sy efa tavela avy any amin'ny fahababoana, any amin'ny faritany, any dia mitondra fahoriana be sy amin-kenatra. Ary ny mandan'i Jerosalema efa rava masina, sy ny vavahadiny efa levon'ny afo ny. "
1:4 Ary nony efa nandre izany teny izany ny, I nipetraka, ary nitomany sady niferinaina andro maro. Nifady hanina sy nivavaka teo anatrehan'i ny Andriamanitry ny lanitra.
1:5 Ary hoy izaho:: "Miangavy anao aho, Tompo O, Andriamanitry ny lanitra, mahery, lehibe, sy mahatahotra, Izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia anao sy izay mitandrina ny didinao:
1:6 Mety ny sofinao hihaino, ary aoka ny masonao ho hihiratra, mba hohenoinao ny vavaky ny mpanomponao, izay ataoko eo anoloanareo anio mivavaka, andro aman'alina, fa ny Zanak'Isiraely, mpanomponao. Ary aho niaiky ny fahotan'ny ny Zanak'Isiraely, izay efa nanota taminao. Efa nanota, Fa izaho sy ny mpianakavin-draiko.
1:7 Izany no voafitaka ny zava-poana. Ary tsy nitandrina ny didinao sy ny fombafomba sy fitsipika, izay efa nampianarina an'i Mosesy mpanomponao.
1:8 Tsarovy ny teny izay nandidianao an'i Mosesy mpanomponao, nanao hoe:: 'Rehefa ho efa nanao izay mahadiso, Izaho dia hampihahaka anareo any amin'ny firenena.
1:9 Fa raha miverina amiko, ka mitandrina ny didinao, ka araho izany, na dia efa nitarika dia ho any amin'ny furthest mihatra amin'ny lanitra, Hangoniko avy any, ary Izaho hitondra anao indray ho ao amin'ny fitoerana izay nofidiko mba ny anarako fa hitoetra ao. '
1:10 Ary toy izany koa ireo dia mpanomponao sy ny vahoakanao, izay navotanao tamin'ny herinao lehibe sy ny tanana mahery.
1:11 Miangavy anao aho, Tompo O, aoka ny sofinao hihaino tsara ny fivavaky ny mpanomponao, sy ny fivavaky ny mpanomponao rehetra izay vonona amin'ny fahatahorana ny anaranao. Ary noho izany, hitarika ny mpanomponao anio, ary omeo anay ny famindram-po eo imason'io lehilahy io. "Fa izaho no mpitondra kapoaky ny mpanjaka.
2:1 Ary nitranga fa, tamin'ny volana Nisana, tamin'ny taona faharoa-polo Artaksersesy mpanjaka, divay teo anatrehany; Dia natopiko ny divay, ary nomeko azy ho any amin'ny mpanjaka. Ary izaho dia tahaka ny olona Nijaly eo anatrehany.
2:2 Ary hoy ny mpanjaka tamiko: "Nahoana no ny fanehoana mampalahelo, na dia tsy miseho ho marary? Tsy foana, fa ny sasany ratsy, Tsy azoko, ao am-ponao. "Dia namely aho tamin'ny lehibe izaitsizy tokoa ny tahotra.
2:3 Dia vao niteny tamin'ny mpanjaka: "Ry mpanjaka ô, velona mandrakizay. Nahoana no ny maneho hevitra tsy ho fisaonana, satria ny tanàna nisy ny tranon'i ny sepulchers ny raiko efa lao, sy ny vavahadiny efa levon'ny afo ny?"
2:4 Ary hoy ny mpanjaka tamiko: "Inona no mangataka?"Dia nivavaka tamin'Andriamanitry ny lanitra.
2:5 Dia vao niteny tamin'ny mpanjaka: "Raha sitraky ny mpanjaka, Ary raha ny mpanomponao no ankasitrahana eo anatrehanao: fa ianao no naniraka ahy ho any Jodia, tao amin'ny tanàna nisy ny fasan-draiko. Ary Izaho hanangana azy. "
2:6 Ary hoy ny mpanjaka tamiko, miaraka ny vadin'ny mpanjaka, izay nipetraka teo anilany: "Mandra-pahatongan'ny fotoana izay dia ny handeha ho, ary rahoviana no hiverina?"Ary izany no ankasitrahana eo anoloan'ny tarehin'ny mpanjaka, ary toy izany koa Izy no naniraka Ahy. Ary naoriko taminy fotoana ho azy.
2:7 Dia vao niteny tamin'ny mpanjaka: "Raha sitraky ny mpanjaka, mba homeny ahy taratasy ho amin'ireo governora any amin'ny faritra an-dafin'ny ony, mba hitarika ahy amin'ny alalan'ny, mandra-tonga tany Jodia,
2:8 sy taratasy ho amin'i Asafa, ny mpitandrina ny mpanjaka ala, ka mba hanomezany hazo, Amin'izay dia mba ho afaka handrakotra ny vavahady tao amin'ny tilikambo tao an-trano, ary ny mandan 'ny tanàna, sy ny trano izay aho hiditra. "Dia nomen'ny mpanjaka ahy araka ny soa nataon'ny tànan'Andriamanitro Andriamanitro, Izay momba ahy.
2:9 Ary lasa nankany amin'ny mpanapaka ny faritra an-dafin'ny ony, ary nomeko azy ireo ny taratasin'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka efa naniraka ahy mpitarika miaramila sy mpitaingin-tsoavaly.
2:10 ary Sanbala, ny Horonita, ary ny mpanompo Tobia, Amonita, nandre izany. Ary izy ireo Nalahelo, amin'ny fahoriana lehibe, fa efa tonga ny olona izay nitady ny fiadanan'ny ny Zanak'Isiraely.
2:11 Ary tonga tany Jerosalema, ary nitoetra tany telo andro.
2:12 Ary nifoha tamin'ny alina, Izaho sy ny olom-bitsy nomba ahy. Ary tsy hita ny olona ny zavatra efa napetraka tao am-poko hatao any Jerosalema. Ary tsy nisy biby amiko, afa-tsy ny biby izay nipetraka aho.
2:13 Ary niala tao amin'ny alina namaky ny vavahady mankany amin'ny lohasaha, sy teo anatrehan'ny loharanon'ny dragona, ary amin'ny vavahadin-jezika. Ary nandinika ny mandan'i Jerosalema, izay tapaka masina, sy ny vavahadiny, izay efa levon'ny afo.
2:14 Ary nanohy ny vavahadin-doharano, sy ny lakan-drano amin'ny mpanjaka. Ary tsy nisy toerana ho an'ny ny bibi-dia izay nipetraka teo aho hamaky.
2:15 Ary toy izany koa aho, niakatra tamin'ny alina teny an-driaka, ary nandinika ny manda. Ary niverina, Nandalo ny vavahady mankany amin'ny lohasaha, ary niverina.
2:16 Ary ireo governora dia tsy nahalala izay lasa aho, na izay nataoko. Fa efa nambara na inona na inona, na dia izany teboka ara-potoana, ny Jiosy, na tamin'ny mpisorona, na tamin'ny manan-kaja, na ny governora, na ny olon-kafa izay nanao ny asa.
2:17 Ary noho izany dia hoy izy taminy: "Fantatrao ny fahoriana izay isika, satria efa lao Jerosalema, sy ny vavahadiny efa levon'ny afo. Avia, ary aoka isika hanorina indray ny mandan'i Jerosalema, ary aoka isika tsy ho afa-baraka. "
2:18 Ary nanambarana izany taminy ny fomba ny tanan'ny Andriamanitro nomba ahy ny soa, ary ny tenin 'ny mpanjaka, izay efa niteny tamiko. Ary hoy izaho:: "Aoka isika hitsangana, ka handrafitra azy. "Ary ny tànany dia hery ho an'ny tsara.
2:19 fa Sanbala, ny Horonita, ary ny mpanompo Tobia, Amonita, ary Gasema, Arabo, nandre izany. Ary naneso sy hoharatsiratsina antsika, ka hoy izy:: "Inona izao zavatra ataonareo? Azonao ho mikomy ny mpanjaka?"
2:20 Ary hoy aho tamin'izy ireo ny teny, ary hoy izy taminy: "Andriamanitry ny lanitra tena no manampy antsika, ary isika no mpanompony. Aoka isika hitsangana ka handrafitra azy. Fa tsy misy anjara, na rariny, na tany Jerosalema fahatsiarovana ho anareo. "
3:1 ary Eliasiba, ny mpisorona lehibe, nitsangana, sy ny rahalahiny, ny mpisorona, ary nanorina ny vavahadin'ny ondry. Dia nanamasina azy, Ary napetany teo ny roa varavarana, ary hatreo amin'ny tilikambo zato hakiho, dia nanamasina azy, hatramin'ny tilikambo Hananela.
3:2 Koa noho izy, ny mponina tany Jeriko nanorina. Ary teo anilany, Zakora, zanak'i Omry, nanao.
3:3 Fa ny zanaky ny Hassenaah nanao ny vavahadin-kazandrano dia. Dia nisy nanarona azy, Ary napetany teo ny roa sy hidy varavarana mihidy. Ary teo anilany, Meremota, ny zanak'i Oria, ny zanak'i Hakoza, nanao.
3:4 Koa noho izy, Mesolama, ny zanak'i Berekia, ny zanak'i Mesezabela, nanao. Ary teo anilany, Zadoka, ny zanak'i Bana, nanao.
3:5 Ary teo anilany, ny Tekoita nanao. Fa ny manan-kaja teo aminy dia tsy mety mampiditra ny vozony ho amin'ny fanompoana ny Tompo.
3:6 ary Joiada, ny zanak'i Pasea, ary Mesolama, ny zanak'i Besodia, nanao ny vavahady taloha. Dia nisy nanarona azy, Ary napetany teo ny roa sy hidy varavarana mihidy.
3:7 Ary teo anilany, koa Melatia, ny Gibeonita, ary Jadon, ny Meronotita, ny olona avy tany Gibeona sy Mizpa, nanao, ho an'ny governora anankiray tao amin'ny faritra manerana ny ony.
3:8 Koa noho izy, Oziela, , zanak'i Haraia, isan'ny mpanefy volamena, nanao. Koa noho izy, Hanania, ny zanaky ny mpangaroharo zava-manitra, nanao. Ary izy mirahalahy nandao an'i Jerosalema kely hatrany amin'ny rindrin'ny malalaka eny an-dalana.
3:9 Koa noho izy, Refaia, ny zanak'i Ahoana no, mpitarika ny arabe Jerosalema, nanao.
3:10 Koa noho izy, Jedaia, ny zanak'i Haromafa, nanao, tandrifin'ny an-tranony. Koa noho izy, Hatosy, ny zanak'i Hasabnia, nanao.
3:11 Malkia, ny zanak'i Harima, ary Hasoba, ny zanak'i Pahata-moaba, nanorina iray antsasaky ny fehin'i eny an-dalana sy ny tilikambo misy ny fatana fandoroana.
3:12 Koa noho izy, Saloma, ny zanak'i Halohesy, ny mpitarika ny iray antsasaky ny fehin'i Jerosalema ny arabe, nanao, izy sy ny zananivavy.
3:13 Ary Hanona nanao ny vavahady mankany amin'ny lohasaha, ny mponina tany Zanoa. Ireo no nandrafitra izany, Ary napetany teo ny roa sy hidy varavarana mihidy, amin'ny arivo hakiho amin'ny manda, hatrany amin'ny vavahadin'ny eo amin'ny zezika.
3:14 sy Malkia, , zanak'i Rekaba,, ny mpitarika ny an-kalalahana any Beti-hakerema, nanao ny vavahady eo amin'ny zezika. Izy no nanamboatra azy io, ary sazin'ny hananganany ny roa sy hidy varavarana mihidy.
3:15 ary Saloma, ny zanak'i Kola, ny mpitarika ny fehin'i Mizpa, nanao ny vavahadin-doharano dia. Izy no nanamboatra azy io, ary norakofany ilay izy, ary sazin'ny hananganany ny roa sy hidy varavarana mihidy, ary ny rindrin 'ny kamory Sela tamin'ny sahan'ny mpanjaka, ary hatreo amin'ny ambaratonga midina avy any amin'ny Tanànan'i Davida.
3:16 Manarakaraka ireo dia, Nehemia, ny zanak'i Azboka, ny mpitarika ny iray antsasaky ny fehin'i Beti-zora an-kalalahana any, nanao, tandrifin'i ny fasana Davida, ary hatrany amin 'ny dobo, izay naorina tamin'ny asa lehibe, ary hatramin'ny tranon'ny mahery.
3:17 Manarakaraka ireo dia, ny Levita, Rehoma, ny zanak'i Bany, nanao. Manarakaraka ireo dia, Hasabia, ny mpitarika ny iray antsasaky ny fehin'i Keila an-kalalahana any, nanao, tao an-manodidina.
3:18 Manarakaraka ireo dia, ny rahalahiny, Binoy, ny zanak'i Henadada, ny mpitarika ny iray antsasaky ny fehin'i Keila, nanao.
3:19 Koa noho izy, arivo, ny zanak 'i Jesoa, ny mpitarika ny Mizpa, nanorina iray hafa fepetra, tandrifin'ny fiakarana ho any amin'ny zorony mafy.
3:20 Manarakaraka ireo dia, any an-tendrombohitra, Baroka, ny zanak'i Zabay, nanorina iray hafa fepetra, avy any an-jorony ka hatramin'ny varavaran'ny tranon'i Eliasiba, ny mpisorona lehibe.
3:21 Manarakaraka ireo dia, Meremota, ny zanak'i Oria, ny zanak'i Hakoza, nanorina iray hafa fepetra, hatramin'ny varavaran'ny tranon'i Eliasiba, eny an-halavan'ny an-tranon'i Eliasiba.
3:22 Ary ny manarakaraka azy, ny mpisorona, ny olona avy any amin'ny fitàna any amin'ny Jordana, nanao.
3:23 Manarakaraka ireo dia, Benjamina sy Hasoba nanamboatra, tandrifin'ny ny trano. Ary ny manarakaraka azy, Azaria, ny zanak'i Mahaseia, ny zanak'i Anania, nanao, tandrifin'ny an-tranony.
3:24 Manarakaraka ireo dia, Binoy, ny zanak'i Henadada, nanorina iray hafa fepetra, avy tao an-tranon'i Azaria, na dia hatramin'ny manenjana sy amin'ny zorony.
3:25 Ary Palala, ny zanak'i Uzai, nanao, tandrifin'ny manenjana sy ny tilikambo avo tetikasa avy tranon'ny mpanjaka, izany hoe, ho eo an-kianjan'ny trano fiambenana. Manarakaraka ireo dia, Pedaia, ny zanak'i Parosy, nanao.
3:26 Ary ny Netinima, izay nonina tany Ofela, naoriny ho teboka iray tandrifin'ny vavahadin-drano, atsinanana, sy ny tilikambo izay malaza.
3:27 Manarakaraka ireo dia, ny Tekoita nanao fepetra hafa ao amin'ny faritra mifanohitra, avy amin'ny tilikambo lehibe sy ambony amin'ny rindrin'ny tempoly.
3:28 Avy eo, miakatra avy amin'ny vavahadin-tsoavaly dia, ny mpisorona nanao, samy tandrifin'ny an-tranony.
3:29 Manarakaraka ireo dia, Zadoka, ny zanak'i Imera, nanao, tandrifin'ny an-tranony. Ary ny manarakaraka azy, Semaia, ny zanak'i Sekania, ny mpiandry ny vavahady atsinanana, nanao.
3:30 Manarakaraka ireo dia, Hanania, ny zanak'i Selemia, ary Hanona, , fahenin'ny zanak'i Zalaph, nanorina iray hafa fepetra. Manarakaraka ireo dia, Mesolama, ny zanak'i Berekia, nanao, tandrifin'ny ny trano firaketana. Manarakaraka ireo dia, Malkia, ny zanaky ny mpanefy volamena, nanao, dia niakatra ho any an-tranon'ny Netinima sy ny mpivarotra zavatra madinika, tandrifin'ny vavahady fitsarana, ary hatramin'ny trano ambony an-jorony.
3:31 Ary ao anatin'ny trano ambony an-jorony, am-bavahadin'ny ny ondry, ny mpanefy volamena sy ny mpandranto nanao.
4:1 Ary nitranga fa, nony ren'i Sanbala efa reny fa izahay fananganana ny rindrina, dia nirehitra ny fahatezerany. Ary rehefa nifindra indrindra, dia naneso ny Jiosy.
4:2 Ary hoy izy:, talohan'ny ny rahalahiny sy ny vahoaka izay an'ny Samaritana: "Inona no ataon'ireo Jiosy adala? Azo fa ny Jentilisa dia hanome fahafahana azy ireo? Ho sorona izy ireo, ary mahavita tao anatin'ny iray andro? Moa ve izy ireo manana ny fahaiza-manao vato avy tamin'ny antontan-vovoka izay efa nandoro ny?"
4:3 Ary koa, Tobia, Amonita, ny mpanampy, nanao hoe:: "Aoka hanorina. Rehefa miakatra ny amboahaolo, Izy no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda vato. "
4:4 Henoy, Ry Andriamanitray ô, fa efa lasa ny zavatra tsinontsinona. Mihodina ny latsa ataony eo ny lohany, ary omeo anay mba ho tsinontsinona any amin'ny tany fahababoana.
4:5 Enga anie ianao ary tsy hisorona ny helony, ary aoka ny fahotany tsy ho amin'ny tondro-molotra, eo anatrehanao, Fa efa naneso ireo izay manorina.
4:6 Ary toy izany no nanorina ny manda, ary nanatevin-daharana azy io miaraka, na dia mbola tsy vita ny anjara. Ary ny fon'ny olona dia taitra ho an'ny asa.
4:7 Ary nitranga fa, nony ren'i Sanbala, sy Tobia, ary ny Arabo, ary ny taranak'i Amona, ary ny Asdodita efa reny fa ny mandan'i Jerosalema efa nakatona, ary ny efa banga efa nanomboka ho namboatra koa, tezitra izaitsizy tokoa izy ireo.
4:8 Ary nivory izy rehetra, mba hahazoako mandeha sy hamely an'i Jerosalema, ary toy izany koa mba manomana ny Otrika.
4:9 Ary nivavaka ho an'Andriamanitray, ary nametraka mpiambina teo ambonin'ny manda, andro sy alina, aminy.
4:10 Dia hoy Joda:: "Ny hery izay mitondra efa nihena, ary ny habetsahan'ny zavatra tena lehibe, ary toy izany koa isika, dia tsy ho afaka ny hanorina ny manda. "
4:11 Ary ny fahavalonay nanao hoe:: "Aoka Tsy fantatro, na hahatsapa, mandra-tonga eo aminy, ka vonoy, ka mahatonga ny asa ho intsony. "
4:12 Ary nitranga fa, amin'ny toe-javatra folo, ny sasany tonga Jiosy izay nonina akaiky azy ireo, avy amin'ny toerana rehetra izay dia tonga tany aminay, ary nilaza taminay izao.
4:13 Dia nametraka ny olona mba, in toerana ao ambadiky ny rindrina, manodidina azy, amin'ny sabany, sy ny lefona, sy tsipìka.
4:14 Ary nibanjina manodidina, ary nitsangana. Ary hoy aho tamin'ny olona ambony, ary ny governora, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka: "Aza matahotra teo alohany. Tsarovy ny Tompo lehibe sy mahatahotra, ary hiady amin'ny anaran'ny ny rahalahinareo, ny zanakao-lahy sy ny zanakao vavy, ary ny vadinareo sy ny ankohonanareo. "
4:15 Avy eo dia nitranga fa, rehefa fahavalonay efa reny fa efa nilaza antsika, Andriamanitra resy ny torohevitra. Ary isika rehetra niverina ho any amin'ny manda, samy ho any ny asany.
4:16 Ary nony fa, ary hatramin'izay andro izay, antsasaky ny zatovony ireo nanao ny asa, ary ny antsasany voaomana ho niady tamin'ny lefona, sy ny ampinga, sy tsipìka, ary ny fiadiana. Ary ny mpitondra teo ivohony rehetra amin'ny taranak'i Joda.
4:17 Fa izay fananganana ny rindrina, ary foana izay mavesatra, sy mametraka ny zavatra ao an-toerana: iray ny tanany no nanao ny asa, ary ny anankiray dia mitazona sabatra.
4:18 Fa tsirairay nisikinany ny mpandrafitra tamin'ny sabatra tao an-andilany. Ary izy ireo fanorenana, ka dia nitsoka ny anjomara afa-tsy Izaho.
4:19 Ary hoy aho tamin'ny olona ambony, ary ny governora, ary amin'ny sisa amin'ny vahoaka: "Ny asa lehibe no malalaka, ary dia tafasaraka teo amin'ny rindrina iray lavitra hafa.
4:20 Amin'ny na inona na inona toerana mandre ny feon'ny anjomara, hihazakazaka ho amin'io toerana io ho antsika. Ny Andriamanitsika no hiady ho antsika.
4:21 Dia aoka isika hanatanteraka ny asa. Ary aoka ny anankiray antsasaky ny fehin'i isika hihazona ilay lefona, avy teo amin'ny fiakarana vao mangiran-dratsy mandra-kintana hivoaka. "
4:22 Ary tamin'izany andro izany, Dia hoy izy tamin'ny vahoaka: "Aoka ny tsirairay samy amin'ny mpanompony mijanona ao afovoan'i Jerosalema. Ary aoka isika mifandimby, nandritra ny alina sy ny andro, hanao ny asa. "
4:23 Fa izaho sy ny rahalahiko, ary ny zatovoko, ary ny mpiambina izay teo aoriako, dia tsy hanala ny akanjo; samy nanaisotra ny fitafiany ihany no mba hanasana.
5:1 Ary nisy nitranga dia nisy tabataba be ny olona sy ny vadiny ny rahalahiny, ny Jiosy.
5:2 Ary nisy ireo izay nanao hoe:: "Ny zanakao-lahy sy ny zanakai-vavy dia tena maro. Aoka isika handray vary ho toy ny vidiny ho azy ireo, ary avy eo izahay mba hohaninay hivelomanay. "
5:3 Ary nisy ireo izay nanao hoe:: "Aoka isika hanolotra ny saha sy tanim-boaloboka, ary ny tranonay, ary amin'izay isika dia mety hahazo vary mandritra ny mosary. "
5:4 Ary ny sasany nanao hoe:: "Aoka isika mindram-bola ho amin'ny hetra ny mpanjaka, ary aoka isika hanolotra ny saha sy tanim-boaloboka. "
5:5 "Ary izao, araka ny nofo ny rahalahy, dia toy izany ny nofo; ary tahaka ny zanany, toy izany koa ny lahy no. Indro, efa nofehezin'i ny zanakai-lahy sy ny zanakai-vavy ho fanandevozana, ary ny sasany amin'ny zanakai-vavy dia mpanompo, na no manana ny fahafahana hanavotra azy ireo, ny hafa hanana ny taninay sy ny tanim-boalobokay. "
5:6 Ary nony efa nandre ny fitarainany ao ireo teny ireo, Tezitra izaitsizy tokoa aho.
5:7 Ary ny foko ato anatiko raisina. Ka dia nananatra mafy ny manan-kaja ary ireo governora, ary hoy izy taminy, "Efa efa mitaky ny hanompoana azy tsirairay zana-bola avy amin'ny rahalahy?"Ary namory ny fiangonan-dehibe aminy.
5:8 Ary hoy izaho taminy:: "Araky ny fantatrao, araka izay azo atao ho antsika, dia efa nanavotra ny rahalahy, ny Jiosy, izay efa namidy tamin'ny jentilisa. Na izany aza anefa ianao ankehitriny, mivarotra ny rahalahinareo, ary tsy maintsy manavotra azy ireo?"Dia nangina, sady tsy nahita na inona na inona izy ireo mba hamaliana.
5:9 Ary hoy izaho taminy:: "Izao zavatra ataonareo Tsy tsara. Nahoana no tsy mandeha araka ny fahatahorana an'Andriamanitsika, ka mba hisy tsy baraka anay tamin'ny fahavalonay, ny jentilisa?
5:10 Samy izaho sy ny rahalahiko, amin'ny mpanompoko, efa nampindrana vola sy vary maro. Aoka isika tsy manaiky ny mangataka ny hiverina. Aoka isika hamela heloka ny hafa izay nitrosa vola ho antsika.
5:11 Amin'izany andro izany, hampody ny sahany, ary ny tanim-boaloboka, ary ny sahan'oliva, ary ny tranony ho azy ireo. Avy eo, koa, ny ampahazaton'ny vola, sy ny vary, divay, ary ny menaka, izay matetika hamitaka azy, omeo azy. "
5:12 Ary hoy izy ireo:: "Hampodinay izany, ary tsy haka na inona na inona avy aminy. Ary isika dia hanao araka izay lazainao. "Dia niantso ny mpisorona aho, ary azoko izany mivoady, ka dia hanao zavatra izy ireo, araka izay efa nolazainy.
5:13 Koa, Dia nanopakopa ny am-pofoana, ka hoy izaho:: "Tahaka izany anie no hanakopahan'Andriamanitra ny olona rehetra, izay tsy hahatanteraka izany teny izany. Hiala amin'ny tranony sy ny asany, dia mety hangozohozo izy ka ho lasa foana. "Ary hoy ny vahoaka manontolo, "Amen." Ary dia nidera an'Andriamanitra. Noho izany, ny olona nanao zavatra araka izay efa nanao hoe:.
5:14 Ary hatramin'ny andro izany, izay ny mpanjaka efa nandidy ahy ho governora amin'ny tany Joda,, hatramin'ny taona faharoa-polo ka hatramin'ny taona faharoa amby telo-polo Artaksersesy mpanjaka, roa ambin'ny folo taona, Izaho sy ny rahalahiko dia tsy hihinana ny fanao isan-taona izay nananan'ny vola fanampiana ho an'ny governora.
5:15 Fa ireo governora fahiny, ireo izay teo alohako, dia tonga enta-mavesatra ny vahoaka, ka dia naka avy azy hanina sy divay, ary efa-polo sekely isan'andro vola. Ary ny manam-pahefana Ary nampahory ny vahoaka. Fa izaho tsy mba nanao izany, noho ny tahotra an'Andriamanitra.
5:16 Raha ny tena izy, Dia nisafidy ny hanao ao amin'ny asan 'ny manda, Ary novidiko tsy tany, ary ny zatovoko rehetra dia voangona hanao ny asa.
5:17 Toy izany koa, ny Jiosy ary ireo governora, amby zato lehilahy dimam-polo, teo amin'ny latabatro, amin'ny tsy izay nankeo aminay avy tamin'ny jentilisa izay manodidina antsika.
5:18 Ary nisy namboarina ho ahy, tamin'ny andro tsirairay, omby iray sy ondrilahy matavy enina, miaraka amin'ny akoho amam-borona. Ary indray mandeha isaky ny folo andro, I nizara samihafa divay sy ny zavatra maro hafa. Nefa tsy mitaky ny vola fanampiana isan-taona toy ny governora. Fa ny olona dia nahantra indrindra.
5:19 Tsarovy aho, O Andriamanitro, ny soa, araka izay rehetra nataoko ho an'ity firenena ity.
6:1 Ary nitranga fa, nony ren'i Sanbala, sy Tobia, ary Gasema, Arabo, sy ny fahavalo hafa, efa reny fa efa nanao ny manda, ary tsy nisy fahatapahana sisa ao, (na izany aza, tamin'izany fotoana izany, Aho tsy mbola voalatsako ny lela-varavarana roa teo am-bavahady,)
6:2 Sanbala sy Gasema naniraka ho any amiko, nanao hoe:: "Avia, ary aoka isika hamely ny fifanarahana teo an-tanàna, amin'ny tany lemak'i Ono. "fa izy kosa no nieritreritra fa izy ireo hanisy ratsy ahy.
6:3 Noho izany, Dia naniraka olona hankany aminy, nanao hoe:: "Aho hanao asa lehibe, ary tsy afaka midina, fandrao angamba dia mety ho tsirambina rehefa mivoaka sy midina aminao. "
6:4 Dia naniraka tany amin'i ahy, izany teny izany, inefatra. Ary namaly azy ny teny toy ny teo aloha ihany.
6:5 Ary Sanbala naniraka ny mpanompony ho ahy ny fotoana fahadimy, miaraka amin'ny teny teo aloha, ary nisy taratasy teny an-tànany voasoratra ato amin'ity fomba:
6:6 "Izany no re any amin'ny jentilisa, ary Gasema efa niteny, fa ianao sy ny Jiosy dia mikasa hikomy, ary noho izany, ianao fanorenana ny manda, ary mihevitra hanampy ny tenanao ho mpanjaka hanjaka aminy. Izany no antony,
6:7 ianao koa dia efa nametraka ny mpaminany, izay mitory momba anao any Jerosalema, nanao hoe:: 'Misy mpanjaka tany Jodia!'Fa ny mpanjaka hihaino momba izany teny izany. Noho izany, tonga izao, mba hankanesako any amin'ny saina ihany. "
6:8 Dia naniraka ho any aminy, nanao hoe:: "Nisy nanao na inona na inona araka izany teny izany, izay nolazainao. Fa Hianao no namorona ireo zavatra ireo avy amin'ny fony. "
6:9 Fa ireo lehilahy ireo rehetra te hampitahotra antsika, mieritreritra fa ny tanana dia hitsahatra amin'ny asa, ary hitsahatra izahay. Izany no antony, I nampahery tanako mandritra ny more.
6:10 Ary niditra tao an-tranon'i Semaia, ny zanak'i Delaia, ny zanak'i Mehetabela, ao amin'ny miafina. Ary hoy izy:: "Aoka isika hiara-maka hevitra ao an-tranon'Andriamanitra, ao anatin'ny tempoly. Ary aoka isika hanakatona ny varavaran'ny tempoly. Fa ho avy hamono anao, ary izy ireo ho tonga amin'ny alina mba hamono anao. "
6:11 Ary hoy izaho:: "Ahoana moa no olona tahaka ahy handositra? Ary izay tia ahy dia tokony hiditra ny tempoly, ka dia ho velona? Tsy hiditra aho. "
6:12 Ary takatro fa tsy Andriamanitra no naniraka azy, fa efa niteny tamiko toy ny hoe izy no maminany, ary Tobia sy Sanbala notambazan'i.
6:13 Fa efa nanaiky vola, ka dia matahotra aho, ka hanota, ary toy izany koa izy ireo fa manana ny ratsy izay mba ananaranao ahy.
6:14 Tsarovy aho, Tompo O, noho ny amin'i Tobia sy Sanbala, noho ny asan'ny tsara fanahy ity. Avy eo, koa, Noadia, mpaminanivavy, ary ny sisa amin'ny mpaminany, dia no nampitahotra ahy.
6:15 Ary ny manda dia vita tamin'ny andro fahadimy amby roa-polo tamin'ny volana ELOLA, tamin'ny roa amby dimam-polo andro.
6:16 Avy eo dia nitranga fa, rehefa fahavalonay rehetra nandre izany, ny firenena rehetra izay manodidina antsika raiki-tahotra, ka dia downcast-pony ireo. Satria fantany fa io asa io efa vita Andriamanitra.
6:17 Fa koa, tamin'izany andro izany, rehefa maro ny taratasy dia nampitondrainy ny manan-kaja amin'ny Jiosy ho any amin'i Tobia, ary dia tonga avy any Tobia ho any aminy.
6:18 Fa nisy maro tany Jodia, izay efa nianiana taminy, satria, zanak'i-in-lalàna Sekania, ny zanak'i Ara, ary satria Johanana, zanany, efa nanambady ny zanakavavin'i Mesolama, ny zanak'i Berekia.
6:19 Koa, dia nidera azy teo anatrehako, ary nilaza ny teniko tany aminy. Ary Tobia kosa nampitondra taratasy, ka mba ho ahy.
7:1 Avy eo, rehefa vita ny manda, ary ataoko eo ny varavarana roa sosona, ary ny mpiandry varavarana dia nisoratra anarana, ary ny mpihiralahy, ary ny Levita,
7:2 I Nandidy Hanany, ny anadahiko, sy Hanania, ny mpitarika ao an-tranon'i Jerosalema, (fa toa ho marina ny olona, matahotra an'Andriamanitra mihoatra noho ny olon-kafa,)
7:3 ary hoy izy taminy: "Aoka tsy ny vavahadin'i Jerosalema mandra-pahatongan'ny hovohana masoandro dia mafana." Ary raha mbola nijanona teo, ny vavahadiny izay efa nihidy sy voasakana. Ary nijanona mpiambina avy amin'ny mponin'i Jerosalema, samy ao amin'ny indray, ary samy tandrifin'ny an-tranony.
7:4 Ary ny tanàna dia lehibe sy tena malalaka, ary ny vahoaka teo aminy dia vitsy, ary ny trano dia tsy mbola naorina.
7:5 Fa Andriamanitra efa nomena ny foko, ary namory ny olona ambony, ary ireo governora, ary ny sarambabem-bahoaka, ka dia mba hosoratana izy ireo. Ary hitako ny bokin 'ny fanisàna' ireo izay niakatra voalohany, ary ao dia hita voasoratra:
7:6 Ary izao no zanaky ny faritany, izay niakatra avy amin'ny fahababoana ny transmigration, ireo izay Nebokadnezara, ny mpanjakan'i Babylona, efa nesorina, ary niverina ho any Jerosalema sy Jodia, samy ho any amin'ny tanànany avy.
7:7 Dia tonga tamin'i Zerobabela, Jesoa, Nehemia, Azaria, Ramia, Nahanany, Mordekay, Bilsana, Mispereta, Bigvay, Nehum, Bana. Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny olona Isiraely:
7:8 Tamin'ny taranak'i Parosy, roa arivo sy iray hetsy fito-polo roa.
7:9 Ary ny zanakalahin'i Sefatia, fito-polo amby telon-jato roa.
7:10 Ary ny zanakalahin'i Ara, dimam-polo amby enin-jato roa.
7:11 Ary ny zanakalahin'i Pahata-moaba avy amin'ny taranak'i Jesoa sy Joaba, roa arivo valo ambin'ny folo amby valon-jato.
7:12 Ary ny taranak'i Elama, ny iray dimam-polo amby roan-jato arivo-efatra.
7:13 Ary ny zanakalahin'i Zato, efa-polo amby valon-jato-dimy.
7:14 Ary ny zanakalahin'i Zakay, enim-polo amby fiton-jato.
7:15 Ary ny zanakalahin'i Binoy, efa-polo amby enin-jato-valo.
7:16 Ary ny zanakalahin'i Bebay, enin-jato amby roa-valo.
7:17 Ary ny taranak'i Azgada, roa arivo amby telon-jato amby roa-roa.
7:18 Ary ny zanakalahin'i Adonikama, enina amby enim-polo amby fiton-.
7:19 Ary ny zanakalahin'i Bigvay, roa arivo fito amby enim-polo.
7:20 Ary ny zanakalahin'i Adin, dimam-polo amby enin-jato dimy.
7:21 Ary ny zanakalahin'i Atera, zanak'i Hezekia, valo amby sivi-folo.
7:22 Ary ny taranak'i Hasoma, amby telon-jato amby roa-valo.
7:23 Ary ny zanakalahin'i Bezay, roa-polo amby telon-jato efatra.
7:24 Ary ny zanakalahin'i Harifa, dia roa ambin'ny folo amby zato.
7:25 Ary ny zanakalahin'i Gibeona, dimy amby sivi-folo.
7:26 Ary ny zanakalahin'i tany Betlehema sy Netofa, valo-polo amby zato valo.
7:27 Ny mponina tany Anatota, zato valo amby roa-.
7:28 Ny mponina tany Bet-azmaveta, roa amby efa-polo.
7:29 Ny mponina tany Kiriata-jearima, Kefira, ary Berota, efa-polo amby fiton-jato-telo.
7:30 Ny mponina tany Rama sy Geba, enin-jato amby roa-polo.
7:31 Ny mponina tany Mikmasy, roa-polo amby zato roa.
7:32 Ny mponina tany Betela sy Ay, roa-polo amby zato-telo.
7:33 Ny mponina tany amin'ilay Nebo anankiray, roa amby dimam-polo.
7:34 Ny mponina tany Elama anankiray, ny iray dimam-polo amby roan-jato arivo-efatra.
7:35 Ary ny zanakalahin'i Harima, roa-polo amby telon-jato.
7:36 Ary ny zanakalahin'i Jeriko, efa-polo amby telon-jato-dimy.
7:37 Ary ny zanakalahin'i Loda, Hadid, ary Ono, fiton-jato amby roa-polo.
7:38 Ary ny zanakalahin'i Sena, telo arivo telo-polo amby sivin-jato.
7:39 ny mpisorona: ny taranak'i Jedaia tao an-tranon'i Jesoa, fito-polo amby sivin-jato telo.
7:40 Ary ny zanakalahin'i Imera, iray roa arivo amby dimam-polo.
7:41 Ary ny zanakalahin'i Pasora, iray efa-polo amby roan-jato arivo-fito.
7:42 Ary ny zanakalahin'i Harima, fito ambin'ny folo sy arivo.
7:43 Ary ny Levita koa: ny taranak'i Jesoa sy Kadmiela, ny zanany
7:44 Hodavia, efatra amby fito-polo. Ny fihirana ny olona:
7:45 tamin'ny zanak'i Asafa, efa-polo amby zato-valo.
7:46 ny mpiandry varavarana: ny taranak'i Saloma, ny taranak'i Atera, ny taranak'i Talmona, ny taranak'i Akoba, ny taranak'i Hatita, ny taranak'i Sobay, telo-polo amby zato-valo.
7:47 Ny Netinima: ny taranak'i Ziha, ny taranak'i Hasofa, ny taranak'i Tabaota,
7:48 ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Siaha, ny taranak'i Padona, ny taranak'i Lebana, ny taranak'i Hagabaha, ny taranak'i Salmay,
7:49 ny taranak'i Hanana, ny taranak'i Gidela, ny taranak'i Gahara,
7:50 ny taranak'i Reaia, ny taranak'i Rezina, ny taranak'i Nekoda,
7:51 ny taranak'i Gazama, ny taranak'i Oza, ny taranak'i Pasea,
7:52 ny taranak'i Besay, ny zanaky ny Meonita, ny zanaky ny Nefisita,
7:53 ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Hakafa, ny taranak'i Harora,
7:54 ny taranak'i Bazlota, ny taranak'i Mehida, ny taranak'i Harsa,
7:55 ny taranak'i Barkosa, ny taranak'i Sisera, ny taranak'i Temah,
7:56 ny taranak'i Nezia, ny taranak'i Hatifa.
7:57 Ary ny taranaky ny mpanompon'i Solomona: ny taranak'i Sotahy, ny taranak'i Sofereta, ny taranak'i Perida,
7:58 ny taranak'i Jala, ny taranak'i Darkona, ny taranak'i Gidela,
7:59 ny taranak'i Sefatia, ny taranak'i Hatila, ny taranak'i Pokereta, izay teraka avy hazebaima, ny zanak'i Amona.
7:60 Ny Netinima rehetra sy ny taranaky ny mpanompon'i Solomona, sivi-folo amby telon-jato-roa.
7:61 Ary izao no ireo izay niakatra avy any Telmelah, Telhrsh, kerobima, Singa itatra, ary More; fa tsy afaka milaza ny fianakaviambe avy amin'ireo rainy sy ny taranany, na avy tamin'ny Isiraely:
7:62 ny taranak'i Delaia, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekoda, efa-polo amby enin-jato-roa;
7:63 ary amin'ny mpisorona: ny taranak'i Hobaiah, ny taranak'i Hakoza, ny taranak'i Barzilay, nampaka-bady avy tamin'ny zanakavavin'i Barzilay, ny Gileadita, ary dia nantsoina araka ny anarany.
7:64 Ireo dia nitady ny soratra ao amin'ny fanisam-bahoaka, ary tsy nahita izany, koa araka izany ny dia noroahina hiala ny fisoronana.
7:65 Ary ny mpandroso zava-pisotro nanao taminy fa tsy mahazo mihinana amin'ny Masina Indrindra, mandra-pitsangan'izay mpisorona dia hitsangana izay nianatra sady kanto.
7:66 Ny vahoaka manontolo, izay dia tahaka ny olona iray, dia roa arivo amby efa-polo amby telon-jato enim-polo,
7:67 ankoatra ny lehilahy sy vehivavy mpanompony, izay fito arivo amby telo-polo amby telon-jato fito, ary teo aminy nisy mpihiralahy sy mpihiravavy, efa-polo amby roan-jato-dimy.
7:68 Ny soavaliny dia telo-polo amby fiton-jato-enina; ny ampondrany dia efa-polo amby roan-jato-dimy.
7:69 Ny ramevany dia telo-polo amby efa-jato-dimy; ny boriky dia enina arivo amby roa-polo amby fiton-jato.
7:70 Ary maro ny mpitarika ny fianakaviana dia nanome ny asa. Ny mpandroso zava-pisotro dia nanome ny rakitry ny tempoly arivo drakma volamena, dimam-polo vilia baolina, ary telo-polo amby dimam-jato akanjon'ny mpisorona.
7:71 Ary ny sasany tamin'ny mpitarika ny fianakaviana dia nanome ny rakitra hanaovana ny asa roa alina drakma volamena, ary ny roan-jato sy roa arivo mina volafotsy.
7:72 Ary ny toetry ny sisa nomen'ny olona dia roa alina drakma volamena, ary roa arivo mina volafotsy, ary mpisorona fito amby enim-polo fitafiana.
7:73 Ary ny mpisorona, ary ny Levita, ary ny mpiandry varavarana, ary ny mpihiralahy, ary ny sisa amin'ny sarambabem-bahoaka, ary ny Netinima, ary ny Isiraely rehetra nonina tany ny tanàna.
8:1 Ary ny fahafito dia tonga volana. Ary ny Zanak'Isiraely dia tao an-tanànany. Ary ny vahoaka rehetra dia nivory, toy ny olona iray, eny an-dalambe izay anoloan'ny vavahadin-drano. Dia niteny tamin'i Ezra mpanora-dalàna, ka mba hitondra ny bokin'ny lalàn'i Mosesy, ny Tompo izay efa nampianarina ny Isiraely.
8:2 Noho izany, Dia nentin'i Ezra mpisorona ny lalàna teo imason'ny olona maro ny lehilahy sy ny vehivavy, ary izay rehetra afaka mahatakatra, tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahafito.
8:3 Ka novakiny-karihary eny an-dalana izay teo anoloan'ny vavahadin-drano, hatramin'ny maraina ka mandra-pitataovovonan'ny andro, eo imason'ny ny lehilahy sy ny vehivavy, ary ireo izay nahatakatra. Ary ny sofin'izay rehetra ny olona hihaino ny bokin'ny.
8:4 Ary Ezra mpanora-dalàna nitsangana teo ambonin'ny hazo dingana, izay efa natao ho miteny. Ary nitsangana teo anilany dia Matitia, sy Semaia, sy Anaia, ary Oria, sy Hilkia, sy Mahaseia, teo ankavanany. Na amin'ny ankavia dia Pedaia, Misaela, sy Malkia, sy Hasoma, ary Hashbaddanah, Zakaria, ary Mesolama.
8:5 Ary Ezra namelatra ny boky eo anatrehan'ny olona rehetra. Fa niavaka mihoatra noho ny olona rehetra. Ary rehefa nosokafany izany, ny olona rehetra nitsangana.
8:6 Ary Ezra nisaotra ny Tompo, Andriamanitra lehibe. Ary ny olona rehetra namaly, "Amen, Amen,"Nanandra-tanana. Ka niankohoka, dia niankohoka an'Andriamanitra, miatrika ny tany.
8:7 Ary Jesoa, sy ny vola, ary Serebia, Guarantee, Akoba, Sabetahy, Hodia, Mahaseia, Kelita, Azaria, Jozabada, Hanan, Pelaia, ny Levita, nahatonga ny olona mba hangina, mba hihaino ny lalàna. Ary ny olona nijoro tamin'ny tongony.
8:8 Ary namaky ny teny tao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra, mazava tsara sy mazava tsara, mba ho azon'ny. Ary nony maraina ny mamaky, izy ireo hendry.
8:9 Ary Nehemia (dia izy no ilay mpandroso zava-pisotro) ary Ezra, ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna, ary ny Levita, izay nandika ny olona rehetra, nanao hoe:: "Ity andro ity efa masina ho an'i Jehovah Andriamanitray. Aza malahelo, ary aza mitomany. "Fa ny olona rehetra nitomany, raha mbola nihaino ny tenin'ny lalàna.
8:10 Ary hoy Izy taminy:: "Mandehana, mihinana sakafo matavy sy misotro zava-pisotro mamy, dia mba anatero anjara izay tsy voaomana ho azy. Fa ny andro masina ny Tompo. Ary aza malahelo. Fa ny fifaliana avy amin'i Jehovah no fiarovana mafy koa isika. "
8:11 Ary ny Levita nampianatra ny olona mba hangina, nanao hoe:: "Mangìna. Fa masina ity andro ity. Ary aza halahelo. "
8:12 Ary toy izany koa ny olona rehetra nandeha, ka mba hihinana sy hisotro, ary toy izany koa mba anatero anjara, ary toy izany koa mba ho fifaliana lehibe. Fa azony tsara ny teny rehetra izay efa nampianarina azy ireo.
8:13 Ary amin'ny andro faharoa, ny mpitarika ny fianakaviana rehetra ny olona, ny mpisorona, ary ny Levita efa vory tany Ezra mpanora-dalàna, ka mba hahay mandika teny koa ho azy ireo ny tenin'ny lalàna.
8:14 Dia hitany voasoratra teo amin'ny lalàna, izay nampandidian'i Jehovah an'i nampianatra ka nampilazainy an'i Mosesy, fa ny Zanak'Isiraely ho velona an-day amin'ny andro-panajana tamin'ny volana fahafito,
8:15 ary tokony hanaovanareo antso avo izy ireo ary mandefa feo ny tanànany rehetra sy Jerosalema, nanao hoe:: "Mandehana any an-tendrombohitra, ary mitondra sampana oliva, ary ny sampany hazo tsara tarehy, rotra sampana, sy ny sampan-drofia, ary ny sampan hazo mikirindro,"Ka mba hanao trano rantsan-kazo, araka ny voasoratra.
8:16 Dia nandeha ny olona ka nitondra. Ary nanao trano rantsan-kazo ho azy, samy teo ny fonenany, sy teo anatin'ny tokotaniny, ary teo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamanitra ny, ary teo an-kalalahana vavahadin-drano, ary teo an-kalalahana akaikin'ny vavahadin'i Efraima.
8:17 Noho izany, ny vahoaka manontolo, ireo izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana nanao trano rantsan-kazo, ary nonina an-day. Fa hatramin'ny andron'i Jesoa, ny zanak'i Nona, na dia amin'izany andro izany, ny Zanak'Isiraely tsy mbola nanao izany. Ary nisy fifaliana lehibe izaitsizy tokoa.
8:18 Ary dia namaky ny teny tao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra, mandritra ny andro tsirairay, hatramin'ny andro voalohany ka hatramin'ny andro farany indrindra. Ary nitandrina ny panajana hafitoana. Ary amin'ny andro fahavalo, nisy ny fivoriana araka ny fombafomba.
9:1 Avy eo, tamin'ny andro fahefatra amby roa-polo amin'ity volana, ny zanak'i Isiraely, dia tonga miara-fifadian-kanina sy amin'ny lamba fisaonana, ary ny tany eo aminy.
9:2 Ary ny taranaky ny zanak'Israely, dia tafasaraka rehetra ireo no zanakalahin'i vahiny. Ary nitsangana teo, ka niaiky ny fahotany sy ny heloky ny razany.
9:3 Ary nitsangana izy, dia hahafahatra ianareo. Ary namaky ny teny tao amin'ny horonam-lalàn'i Jehovah Andriamaniny, in-efatra amin'ny andro, ary inefatra koa dia nitsotra. Ary izy ireo nitsaoka ny Tompo Andriamaniny.
9:4 Avy eo, eo amin'ny dingana ny Levita, Jesoa, sy ny vola, dia Jesoa sy Kadmiela, Sebania, Bony, Hasabia, vola, ary nitsangana Chenani. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery ho an'i Jehovah Andriamaniny.
9:5 Ary ny Levita, Jesoa sy Kadmiela, Bony, Hasabnia, Hasabia, Hodia, Sebania, ary Petahia nanao hoe:: "Mitsangàna. Misaora an'i Jehovah Andriamanitrao, hatramin'ny mandrakizay ka hatramin'ny mandrakizay! Ary isaorana anie ny anaran'ny misandratra ny voninahitrao, amin'ny fisaorana sy ny fiderana rehetra.
9:6 Ianao irery, Tompo O, nanao ny lanitra, ary ny lanitry ny lanitra, ary ny miaramila rehetra, ny tany sy ny zava-drehetra izay eo aminy, ny ranomasina ary ny zava-drehetra izay eo aminy. Ary nomenao aina ny rehetra izany. Ary ny eny amin'ny lanitra adores anao.
9:7 ianao, Andriamanitra Tompo ô, no Ilay Izay nifidy an'i Abrama. Ary nitondra an'i Jesosy ho anareo avy amin'ny afo ny Kaldeana, ary nomeny azy ny anarany ho Abrahama.
9:8 Ary ianao nahita ny fony fa nahatoky teo anatrehanao. Ary ianao namorona ilay fanekena taminy, tena mba hanome azy ny tany Kanana, ny Hetita, ary ny Amorita, sy ny Perizita, ary ny Jebosita, sy ny Girgasita, ka mba hanome azy io ho an'ny taranany. Ary efa nahatanteraka ny teninao, fa Hianao no marina.
9:9 Ary Ary nahita ny fahorian'ny razanay tany Ejipta. Ary renao ny fitarainany teo akaikin'ny Ranomasina Mena.
9:10 Ary nanao famantarana sy zava-mahagaga ny Farao, sy tamin'ny mpanompony rehetra, ary ny vahoaka amin'ny taniny. Fantatrao mantsy fa nataony nirehareha tamin'ireny. Ary ianao nanao anarana ho Anao, toy ny any amin'izao anio izao.
9:11 Ary ny ranomasina dia nosarahinao teo anoloany, ary dia nita namaky teo afovoan'ny ranomasina nandia ny tany maina. Fa ny mpanenjika azy kosa hatsipy any amin'ny lalina, tahaka ny vato amin'ny rano be.
9:12 Ary tamin 'ny andri-rahona, ianao no mpitondra azy ireo amin'ny andro, ary amin'ny andry afo, alina, ka mba hahita ny lalana eny izay mety handroso.
9:13 Ianao koa dia nidina an-tendrombohitra Sinay, ka niteny taminy tany an-danitra. Ary nanome azy didim-pitsarana marina, ary ny lalàn 'ny fahamarinana, ary ny lanonana, ary tsara fitsipika.
9:14 Ianao nanambarana izany taminy nanamasina ny Sabata, ary nampianatra azy ireo amin'ny didy, ary ny lanonana, ary ny lalàna, ka nampilazainy an'i Mosesy, mpanomponao.
9:15 Hianao koa nomeny mofo avy any an-danitra ao amin'ny hanoanana, ary nentinao nivoaka rano avy amin'ny vatolampy ho azy ireo amin'ny nangetaheta. Ary hoy izy taminy ianao mba hiditra sy handova ny tany, ny izay nanandratra ny tananao, ka mba omeo azy.
9:16 Na izany aza tena, ireny razanay nanao nirehareha, ary nanamafy ny hatony, ka tsy nihaino ny didinao.
9:17 Ary tsy vonona ny hihaino, ka tsy mahatsiaro, ny fahagagana izay efa tanteraka ho azy ireo. Ary izy ireo nanamafy ny hatony, ary dia nanatitra ny lohany, ka dia hody amin'ny fanandevozana, toy ny hoe ao amin'ny fifandirana. fa ianareo, mamela heloka Andriamanitra, mandefitra sy be famindram-po, fahari-po sy feno fangorahana, tsy nandao azy ireo.
9:18 Tokoa, na dia efa natao ho ombilahy kely an-idina tenany, ary efa nanao hoe:, 'Izao no Andriamanitrao, izay nitondra anao avy tany Ejipta!'Sy ho mpitandrina ny fitenenan-dratsy lehibe,
9:19 na izany aza, noho ny haben'ny famindram-ponao, tsy mandefa azy any an-efitra. Ny andri-rahona tsy niala taminy raha antoandro, mantsy izy, mba hitarika azy ireo teny an-dalana, na ny andri-afo nony alina, mantsy izy, mba mampiseho azy ireo ny làlana miaraka izay mety handroso.
9:20 Ary nanome azy ny Fanahinao tsara, ka mba hampianatra azy, ary tsy niaro ny namanao tamin'ny vavany, ary nanome azy rano, raha nangetaheta amin'ny.
9:21 Efa-polo taona, no nanome sakafo azy tany an-efitra, ary tsy nisy tsy azony; ny fitafiany dia tsy rovitra, ary ny tongony tsy mba tonta teo.
9:22 Ary nanome azy fanjakana sy firenena maro, ary nizara azy ireo araka ny filokana. Ary dia nahazo ny tanin'i Sihona, sy ny tanin'ny mpanjakan'i Hesbona, ary ny tanin'i Oga, ny mpanjakan'i Basana.
9:23 Ary maro ny zanany ianareo tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Ary ianao nitondra azy ho any amin'ny tany, momba izay efa nolazainao tamin'ny razany fa efa ho hiditra sy handova azy.
9:24 Ary ny zanakalahin'i tonga ka nandova ny tany. Ary ianao nanetry tena ny mponina amin'ny tany, ny Kananita, eo anoloany. Ary ianao nanolotra azy ho eo an-tanany, tanany ireo mbamin'ny mpanjakany, sy ny olona tompon-tany, mba hanaovany azy araka fa nahafaly azy ireo.
9:25 Koa araka izany ny tanàna voaro mafy sy ny nosamboriny matavy tany. Dia nahazo trano feno entana isan-karazany, lavaka fanangonan-drano atao amin'ny olon-kafa, tanim-boaloboka, ary ny sahan'oliva, ary ny hazo fihinam-boa be dia be. Ary nihinana izy ireo ka voky. Ary izy ireo matavy, ary be tamin'ny nahafinaritra avy amin'ny haben'ny zava-tsoa.
9:26 Anefa izy ireo nampahatezitra anao fahatezerana, ary dia niala avy aminao, izy ary nametraka ny lalànao teo ivohony. Dia namono ny mpaminaninao, izay nifandahatra taminy ka mba hiverina aminao. Ary izy ireo nanao fitenenan-dratsy lehibe.
9:27 Ary toy izany koa no nanolotra azy teo an-tànan'ny fahavalony, ary nampahoriany azy. Ary amin'ny andro fahoriany, ny olona niantso anao, ary avy any an-danitra no nandre azy. Ary araka ny haben'ny fangoraham-po, nomenao mpamonjy, izay mety hamonjy azy amin'ny tanan'ny fahavalony.
9:28 Kanjo rehefa nitsahatra, dia niverina, ka dia nanao izay ratsy eo imasonao. Ary ianao nandao azy eo an-tànan'ny fahavalony, dia nandova azy. Dia miova fo, Ary ny olona niantso anao. Ary avy tany an-danitra no nanaraka azy ireo, ary afaka azy ireo im-betsaka, noho ny famindram-po.
9:29 Ary ianao nifandahatra taminy, ka dia mba hiverina ho any ny lalànao. Na izany aza tena, dia nanao zavatra in fireharehan'ny, ka tsy nihaino ny didinao, ary nanotany ny didim-pitsaranao, izay, Raha misy olona manao azy, no ho velona aminy. Ary dia niala tany fanatitra ny sorony, ary nanamafy ny hatony; ary tsy nety nihaino izy ireo.
9:30 Ary ianao mbola hihaino azy ireo nandritra ny taona maro. Ary ianao nifandahatra taminy ny Fanahinao,, ny alalan 'ny tanan' ny mpaminany. Ary izy ireo tsy nihaino, ary toy izany koa no natolony teo an-tànan'ny firenena amin'ny tany hafa.
9:31 Kanefa, na dia maro indrindra ny famindram-po, tsy hahatonga azy ireo ho lany ritra, na no niala azy ireo. Fa ianao mamindra fo sy mandefitra Andriamanitra.
9:32 Koa ankehitriny, ny lehibe Andriamanitra, mahery sy mahatahotra, Izay mitandrina fanekena sy famindram-po, mba tsy hisorohana ny tavanao ny fahoriana rehetra izay efa hitany antsika, izahay sy ny mpanjakany, sy ny mpitarika, ary ny mpisoronay, sy ny mpaminany, sy ny razanay, ary ny vahoaka rehetra, Hatramin'ny andro fony tany mpanjaka Assur, mandraka androany.
9:33 Fa Hianao no marina, ny zavatra rehetra izay efa manafotra antsika. Fa efa nanao ny marina, fa efa nanao zavatra impiously.
9:34 ny mpanjaka, ny mpitarika, ny mpisoronay, ary ny razanay dia samy tsy nanao ny lalànao, ka dia tsy hihaino ny didinao sy ny teni-vavolombelonao, izay efa nijoro ho vavolombelona teo aminy.
9:35 Fa tsy nanompo anao, ny fanjakana sy ny tenanao zavatra tsara maro, izay nomenao ho azy ireo, sy ny tena malalaka sy lonaka, izay hatolotra eo an-eo imasony, sady tsy azy hibebaka hiala amin'ny ratsy fanahy ny tena mikatsaka.
9:36 Indro, izahay anio ireo dia mpanompon'Andriamanitra. Ary ny tany, izay nomenao ny razanay koa mba hihinana ny mofo sy manana ny zava-tsoa, andevo izahay ao aminy.
9:37 Ary efa betsaka ny vokatra ho an'ny mpanjaka, izay notendrenao hanapaka anay noho ny fahotanay. Ary mpanapaka ny vatantsika, ary ny biby fiompinay, araka hataony araka ny sitrapony. Ary isika ao fahoriana lehibe.
9:38 Noho izany, ny zavatra rehetra ny amin'ireo zavatra ireo, ny tenanay no mamorona sy manoratra ny fanekena, sy ny mpitarika, ny Levita, ary ny mpisoronay no sonia azy io. "
10:1 Ary ny sonia dia: Nehemia, ny mpitondra kapoaka, ny zanak'i Hakalia, ary Zedekia,
10:2 Seraia, Azaria, Jeremia,
10:3 Pasora, Amaria, Malkia,
10:4 Hatosy, Sebania, Maloka,
10:5 Harim, Meremota, Obadia,
10:6 Daniel, Ginetona, Baroka,
10:7 Mesolama, Abia, Mijamin,
10:8 Mazia, nahalala, Semaia; Ireo no mpisorona.
10:9 Ary ny Levita dia: Jesoa, ny zanak'i Azania, Binoy isan'ny zanak'i Henadada, Kedmiela,
10:10 sy ny rahalahiny, Sebania, Hodia, Kelita, Pelaia, Hanan,
10:11 Mica, Rehoba, Hasabia,
10:12 Zakora, Hasabia, Sebania,
10:13 Hodia, vola, Benin.
10:14 Ary ny lohan'ny ny olona: Parosy, Pahata-moaba, Elama, Zato, vola,
10:15 Bony, Azgada, Bebay,
10:16 Adonia, Bigvay, Adin,
10:17 Ater, Hezekia, Azora,
10:18 Hodia, Hasoma, Bezay,
10:19 ः Arif, Anatota, neba,
10:20 Harifa, Mesolama, vonona,
10:21 Mesezabela, Zadoka, Jaddua,
10:22 Pelatia, Hanan, Anaia,
10:23 Hosea, Hanania, Hasoba,
10:24 Hosea, bateria, Hasoba,
10:25 Rehoma, Hasabna, Mahaseia,
10:26 Ahia, Hanan, Anan,
10:27 Maloka, Harim, Bana.
10:28 Ary ny sisa amin'ny olona no mpisorona, ny Levita, ny mpiandry varavarana, ary ny mpihira, ny Netinima, ary izay rehetra efa niavaka, amin'ny olona tompon-tany, araka ny lalàna 'Andriamanitra, ny vadiny, ny zanany lahy, sy ny zanany vavy.
10:29 Rehetra izay afaka mahatakatra, nampanantena amin'ny anaran'ny rahalahiny, ny manan-kaja, ary dia tonga rahateo ny fampanantenana sy nianiana izy ireo fa mandeha araka ny lalàn'i 'Andriamanitra, izay efa nomena ny Mosesy, ny mpanompon'Andriamanitra, fa hanao ary hitandrina ny didin 'ny Tompo Andriamanitsika, sy ny fitsipiny ary ny lanonana,
10:30 ary mba tsy hanome ny zanakai-vavy ny tompon-tany, ary mba tsy hanaiky ny zanany vavy ho an'ny lahy,
10:31 koa izay, Raha ny tompon-tany hitondra ao amin'ny entana amidy na ny zavatra ilaina, mba hahazoany mivarotra azy tamin'ny andro Sabata, fa tsy hividy azy ireo amin'ny andro Sabata, na amin'ny andro masina, ary izahay hamoaka ny taona fahafito, ary ny fanangonana ny trosa avy amin'ny tanana rehetra.
10:32 Ary nametraka fitsipika ny tenantsika, mba hanome ny iray ampahatelon'ny sekely ho an'ny isan-taona ny fanompoana momba ny tranon'Andriamanitsika,
10:33 fa ny mofo aseho, sy ny fanatitra mandrakariva, ary ho dorana mandrakariva ny Sabata, ny voaloham-bolana, ny fotoam-pivavahana, ary ho amin'ny zava-masina, ary ho fanatitra noho ny ota, mba Sorompanavotana ho atao ho an'ny Isiraely, ary ho an'ny rehetra ao anatin'ny mampiasa ny an-tranon'Andriamanitsika.
10:34 Ary nanao filokana izahay ny amin'ny fanatitra ny hazo rehetra amin'ny mpisorona, ary ny Levita, ary ny olona, ka hahatonga azy io ho entina ao an-tranon'i Andriamanitsika, ny tokantrano ny razantsika, amin'ny fotoana voatendry, avy ny andron'ny herintaona hafa, ka mba hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitsika, araka dia ilay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy,
10:35 ary toy izany koa mba ampidiro ny voaloham-bokatry ny taninay, ary ny voaloham-bokatra rehetra ny vokatra avy amin'ny hazo rehetra, isan-taona, tao an-tranon'i Tompontsika,
10:36 ary ny voalohan-teraky ny zanakay lahy, ary ny biby fiompinay, araka izay efa voasoratra ao amin'ny lalàna, ary ny voalohan-teraky ny omby sy ny ondrinay, ka dia mba nanolotra ao an-tranon'Andriamanitsika, ho an'ny mpisorona izay fanompoam-pivavahana ao an-tranon'ny Andriamanitsika,
10:37 ary toy izany koa mba ampidiro ny voaloham-bokatra ny sakafo, ary ny fanatitra aidina momba, ary ny vokatry ny hazo rehetra, koa-boaloboka sy ny diloilo, ny mpisorona, ho any amin'ny trano fitehirizana ny Andriamanitsika, ny fahafolon-karena ny tany ho an'ny Levita. Ary ny Levita koa dia handray ny fahafolon-karena avy amin'ny asa avy tany amin'ny tanàna rehetra.
10:38 Ary ny mpisorona, ny zanak'i Arona, ho amin'ny Levita ny ampahafolon-karena ny Levita, ary ny Levita no atero ho ampahafolon'ny ny fahafolon-karena ao an-tranon'Andriamanitsika, ny storeroom tao an-tranon'i trano firaketana.
10:39 Fa ny zanak'Israely sy ny taranak'i Levy, dia hitondra any amin'ny trano firaketana ny voaloham-bokatry ny vary, ny divay, sy ny diloilony. Ary ny fanaka nohamasinina ho ao, ary ny mpisorona, ary ny mpihiralahy, ary ny mpiandry varavarana, sy ny minisitra. Ary isika tsy hahafoy ny an-tranon'Andriamanitsika.
11:1 Ary ny mpanapaka ny olona nonina tany Jerosalema. Na izany aza tena, ny sisa amin'ny olona nanao filokana, ka mba hisafidy iray anjara amin'ny folo izay hiaina tany Jerosalema, ny tanàna masina, fa ny sivy toko ho an'ny tanàna hafa.
11:2 Dia nitso-drano ny olona ny lehilahy rehetra izay nanolo-tena tamin-kalalahana ho velona ao Jerosalema.
11:3 Ary toy izao no mpitarika ny faritany, izay nonina tany Jerosalema, ary tany an-tanànan'ny Joda,. Ary samy nonina tao amin'ny taniny, tao an-tanànany: Isiraely, ny mpisorona, ny Levita, ny Netinima, ary ny taranaky ny mpanompon'i Solomona.
11:4 Ary tany Jerosalema, dia nipetraka ny sasany tamin'ny taranak'i Joda, ary ny sasany tamin'ny taranak'i Benjamina: ny avy tamin'ny taranak'i Joda, Athaiah, ny zanak'i Aziam, ny zanak'i Zakaria, zanak'i Amaria, ny zanak'i Sefatia, ny zanak'i Mahalalila, ny avy tamin'ny taranak'i Fareza;
11:5 Mahaseia, ny zanak'i Baroka, ny zanak'i Kola, ny zanak'i Hazaiah, ny zanak'i Adaia, ny zanak'i Joariba, ny zanak'i Zakaria, zanaky ny Silonite.
11:6 Ireo rehetra ireo taranak'i Fareza nonina tany Jerosalema, enim-polo amby efa-jato lahy matanjaka valo.
11:7 Ary izao no taranak'i Benjamina: Sllu, ny zanak'i Mesolama, ny zanak'i Joed, , zanakalahin'i Pedaia, ny zanak'i Kolaia, ny zanak'i Mahaseia, ny zanak'i Kolaia, ny zanak'i Jesaia;
11:8 ary nanarakaraka azy Gabay, Salay. Ireo dia sivy amby roa-polo amby valo.
11:9 ary Joela, ny zanak'i Zikry, ny lehibe indrindra no mpitarika. ary Joda, ny zanak'i Hasenoa, no manarakaraka ny tanàna.
11:10 Ary avy ny mpisorona, nisy Jedaia, ny zanak'i Joariba, Jakina,
11:11 Seraia, ny zanak'i Hilkia, ny zanak'i Mesolama, , zanak'i Zadoka,, zanak'i Meraiota, ny zanak'i Ahitoba, ny mpanapaka ny tranon'Andriamanitra,,
11:12 sy ny rahalahiny, izay manao ny asan 'ny tempoly: valon-jato roa-polo amby roan-. sy Adaia, ny zanak'i Jerohama, ny zanak'i Pelalia, ny zanak'i Amzy, ny zanak'i Zakaria, ny zanak'i Pasora, ny zanak'i Malkia,
11:13 sy ny rahalahiny, ny mpitarika eo amin'ny ray: efa-polo amby roan-jato-roa. ary Amasay, ny zanak'i Azarela, ny zanak'i Ahazay, , zanak'i Mesilemota, ny zanak'i Imera,
11:14 sy ny rahalahiny, izay tena mahery vaika: zato valo amby roa-. Ary ny lehibe indrindra dia Zabdiela mpitarika, ny zanaky ny mahery vaika.
11:15 Ary avy ny Levita, nisy Semaia, ny zanak'i Hasoba, zanak'i Azrikama, zanak'i Hasabia, ny zanak'i Bony,
11:16 ary Sabetahy sy Jozabada, izay nifehy ny asa rehetra izay teo ivelany tao an-trano 'Andriamanitra, avy amin'ny mpitarika ny Levita.
11:17 ary Matania, ny zanak'i Mika, ny zanak'i Zabdy, ny zanak'i Asafa, dia ny mpitarika ny fiderana sy ny fibabohana amin'ny vavaka, amin'ny Bakbokia, faharoa eo amin'ny rahalahiny, ary Abda, ny zanak'i Samoa, zanak'i Galala, ny zanak'i Jedotona.
11:18 Ny Levita rehetra tao an-tanàna masina dia valo-polo amby roan-jato efatra.
11:19 Ary ny mpiandry varavarana, Akoba, Talmona, sy ny rahalahiny, izay niambina ny vavahady, dia fito-polo amby zato roa.
11:20 Ary ny sisa amin'ny Isiraely, ny mpisorona sy ny Levita, teo an-tanàna rehetra any Joda, samy ao an-fananany.
11:21 Ary ny Netinima dia nonina tany Ofela, amin'ny Ziha sy Gishpa, ny Netinima.
11:22 Ary ny talen'ny ny Levita tany Jerosalema i Ozy, ny zanak'i Bany, zanak'i Hasabia, zanak'i Matania, ny zanak'i Mika. Ny mpihiralahy eny amin'ny fanompoana tao an-tranon'i Andriamanitra no avy tamin'ny zanak'i Asafa.
11:23 Raha ny tena izy, nisy fitsipika ny mpanjaka momba azy ireo, ary ny didy ny olona eo amin'ny fihirana, mandritra ny andro tsirairay.
11:24 ary Petahia, ny zanak'i Mesezabela, avy tamin'ny taranak'i Zera, ny zanak'i Joda,, dia eo amin'ny tanan'ny mpanjaka ny teny rehetra momba ny vahoaka,
11:25 ary tao an-trano manerana ny faritra rehetra. Ny sasany tamin'ny taranak'i Joda nonina tany Kiriatharba sy ny zana-bohiny vavy, ary tany Dibona sy ny zana-bohiny ny vavy, ary Jekabzeel sy ao amin'ny manodidina,
11:26 ary Jesoa, ary Molada, ary Bethpelet,
11:27 ary Hazarshual, ary Beri-sheba sy ny zana-bohiny ny vavy,
11:28 sy Ziklaga, ary Meconah sy ny zana-bohiny vavy,
11:29 ary Enrimmon, ary Zora, ary Jarmota,
11:30 Zanoah, Adolama, sy ny zana-bohiny, tany Lakisy sy ny faritra, ary tany Azeka sy ny zana-bohiny ny vavy. Ary nonina hatrany Beri-sheba ka hatrany amin'ny lohasahan'i Hinoma.
11:31 Fa ny taranak'i Benjamina nonina hatrany Geba, tany Mikmasy, ary Aia, sy Betela sy ny zana-bohiny ny vavy,
11:32 ho any Anatota, Noba, Anania,
11:33 Hazora, friendly, Loda,
11:34 Hadid, Zeboima, ary Neballat, Loda,
11:35 ary Ono, lohasahan'ny mahay tao-zavatra ny.
11:36 Ary ny sasany tamin'ny Levita dia nizarany tamin'ny Joda sy ny Benjamina.
12:1 Ary ny mpisorona sy ny Levita, izay niakatra tamin'i Zerobabela, ny zanak'i Sealtiela, sy Jesoa: Seraia, Jeremia, Ezra,
12:2 Amaria, Maloka, Hatosy,
12:3 Sekania, Rehoma, Meremota,
12:4 izany, Ginetona, Abia,
12:5 Mijamin, Madia, Bilga,
12:6 Semaia, Joiariba, Jedaia, Sllu, Amoka, Hilkia, Jedaia.
12:7 Ireo no lohan'ny mpisorona sy ny rahalahiny, tamin'ny andron'i Jesoa.
12:8 Ary ny Levita, Jesoa, Binoy, Kedmiela, Hasabia, Joda, Matania, izy ireo sy ny rahalahiny no tonian'ny ny fihirana,
12:9 amin'ny Bakbokia, ary koa ny Hannai, sy ny rahalahiny, samy tao amin'ny biraony.
12:10 Ary nanan-anaka Jesoa Joiakima, ary Joiakima nanan'anaka Eliasiba, ary Eliasiba nanan'anaka Joiada,
12:11 ary nitoe-jaza Joiada Jonathan, ary Jonatana nanan'anaka Jadoa.
12:12 Ary tamin'ny andron'i Joiakima, ny mpisorona sy ny mpitarika ny fianakaviana dia: ny avy tamin'i Seraia, Meraiah; Jeremia, Hanania;
12:13 ny Ezra, Mesolama; ny Amaria, Johanana;
12:14 ny Maluchi, Jonathan; ny Sebania, Joseph;
12:15 Harima, Adna; Meraiota, Helke;
12:16 Adaia, Zakaria; ny avy tamin'i Ginetona, Mesolama;
12:17 Abia, Zikry; an'i Miamina sy tamin'i Moadia, handatsaka;
12:18 ny avy tamin'i Bilga, Samoa; Semaia, Jonatana;
12:19 ny avy tamin'i Joariba, Matenay; ny avy tamin'i Jedaia, Ozy;
12:20 ny Salo, Kalay; ny avy tamin'i Amoka, Ebera;
12:21 Hilkia, Hasabia; ny avy tamin'i Jedaia, Netanela.
12:22 Ary ny Levita koa, tamin'ny andron'i Eliasiba, ary Joiada, ary Johanana, ary Jadoa, ary ny mpisorona, dia nosoratana araka ny mpitarika ny fianakaviana, nandritra ny fotoana nanjakan'i Dariosy Persiana.
12:23 Ary ny zanakalahin'i Levy, araka ny mpitarika ny fianakaviana, voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny tenin 'ireo andro, hatramin'ny andron'i Johanana, ny zanak'i Eliasiba.
12:24 Ary ny mpitarika ny Levita dia Hasabia, Hasabia, sy Jesoa, ny zanak'i Kadmiela, sy ny rahalahiny, ny mifandimby, mba hidera sy miaiky, araka ny didy Davida, ilay lehilahin'Andriamanitra. Ary nanompo koa izy ireo sy ny filaminana.
12:25 Matania, ary Bakbokia, Obadia, Mesolama, Talmona, Akoba, dia mpiambina ny vavahady sy ny vestibules teo anoloan'ny vavahady.
12:26 Ireo no tamin'ny andron'i Joiakima, ny zanak 'i Jesoa, ny zanak'i Jozadaka, sy tamin'ny andron'i Nehemia, ny governora, ary ny Ezra, ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna.
12:27 Ary rehefa hitokanana ny mandan'i Jerosalema, dia nitady ny Levita avy amin'ny rehetra ny toerana, ka mba entiny ho any Jerosalema, ary toy izany koa mba hitandrina ny fitokanana, ary mifalia amin'ny fisaorana, sy ny fihirana, ary ny kipantsona, valiha, sy ny lokanga.
12:28 Ary ny zanaky ny mpihiralahy dia voangona niala teo Arbota manodidina an'i Jerosalema, ary ny avy tamin'ny vohitry ny Netophati,
12:29 ary avy-gilgala, ary avy any amin'ny faritra Geba sy Azmaveta. Fa ny mpihiralahy efa nanao vohitra ho azy manodidina an'i Jerosalema.
12:30 Ary ny mpisorona sy ny Levita ireo nodiovina, ary nodiovina ny olona, sy ny vavahady, ary ny manda.
12:31 Dia nahatonga ireo lohany amin'ny firenen'i Joda mba miakatra ny rindrina, Ary nanokana roa lahy izy antoko mpihira lehibe mba hankalaza. Dia nankany amin'ny ankavanana teo ambonin'ny manda, amin'ny vavahadin-jezika.
12:32 Ary nandeha nanarakaraka azy Hosaia, ary ny antsasaky ny fehin'i iray ny mpitarika Joda,
12:33 ary Azaria, Ezra, ary Mesolama, Joda, ary Benjamina, sy Semaia, ary Jeremia.
12:34 Ary ny sasany tamin'ny taranaky ny mpisorona nitondra trompetra nivoaka: Zakaria, ny zanak'i Jonatana, ny zanak'i Semaia, zanak'i Matania, ny zanak'i Mikaia, ny zanak'i Zakora, ny zanak'i Asafa.
12:35 Sy ny rahalahiny, Semaia, sy Azarela, Nilla, Gilalay, May, Netanela, ary ny Joda, ary Hanany, nivoaka ny tonon-kiran'i Davida, ilay lehilahin'Andriamanitra. ary Ezra, ny mpanora-dalàna, teo anatrehan'i azy teo amin'ny Vavahadin-doharano.
12:36 Ary mifanohitra izy ireo, dia niakatra tamin'ny ambaratongan'ny Tanànan'i Davida, tamin'ny fiakarana amin'ny manda eo ambonin'ny tranon'i Davida, ka hatramin'ny vavahadin-drano ho an'ny atsinanana.
12:37 Ary ny faharoa amboarampeo izay nisaotra Niainga, amin'ny lafiny mifanohitra, ary nandeha nanaraka azy, ary ny antsasaky ny fehin'i iray ny olona teo an-manda, ary natao teo ambonin'ny tilikambo misy ny fatana fandoroana, hatrany amin'ny rindrina mivelatra,
12:38 ary hatreo ambonin'ny vavahadin'i Efraima, ary hatreo ambonin'ny vavahady fahiny, ary hatreo ambonin'ny vavahadin-kazandrano dia, sy ny tilikambo Hananela, sy ny tilikambo Hamata, ary hatrany amin'ny vavahadin'ny ondry. Ary nijanona teo ny fiambenana vavahady.
12:39 Ary ny roa antoko mpihira izay nanome fiderana nijanona tao an-tranon'Andriamanitra, tao am-poko ary iray antsasaky ny fehin'i ireo governora izay niaraka tamiko.
12:40 Ary ny mpisorona, Eliakima, Mahaseia, Mijamin, Mikaia, Elioenay, Zakaria, Hanania, nivoaka nitondra trompetra,
12:41 amin'ny Mahaseia, sy Semaia, ary Eleazara, ary Ozy, ary Johanana, sy Malkia, sy Elama, ary ny arivo. Ary ny mpihira nihira mazava tsara, ary ny lehibe indrindra Jezrahiah no mpitarika.
12:42 Ary tamin'izany andro izany, izy ireo sorona zavatra betsaka hatao fanatitra, ary faly. Fa Andriamanitra no nahatonga azy ireo mifaly sady faly. Ary ny vadiny aman-janany koa dia faly. Ary ny fifaliana tany Jerosalema dia re hatrany lavitra.
12:43 Tamin'izany andro izany ihany koa, Nisoratra anarana ireo olona tonian ny trano firaiketana ao amin'ny rakitry ny tempoly, fa ny fanatitra aidina momba, sy ny voaloham-bokatra, ary ny fahafolon-karena, dia avy ny mpitondra ao an-tanàna mba hitondra izany amin'ny, ireny, amin'ny iombonana amin'ny fisaorana, fa ny mpisorona sy ny Levita. Fa Joda dia nifaly tao ny mpisorona sy ny Levita izay manampy.
12:44 Dia nitandrina ny fiaretan-tory ny Andriamaniny, ary ny fiaretan-tory ny fanavotana, ny mpihiralahy sy ny mpiandry varavarana, araka ny didy Davida, ary Solomona, zanany.
12:45 Fa fahiny tamin'ny andron'i Davida sy Asafa aza, hatrany am-piandohana, nisy mpitarika notendrena hitandrina ny mpihira, mba hidera ao amin'ny andininy, ary hidera an'Andriamanitra.
12:46 Ary ny Isiraely rehetra, tamin'ny andron'i Zerobabela, sy tamin'ny andron'i Nehemia, nanome anjara ny mpihiralahy sy ny mpiandry varavarana, ho an'ny andro tsirairay, ka dia nanamasina ny Levita, ary ny Levita kosa nanokana ny zanak'i Arona.
13:1 Ary tamin'izany andro izany, dia namaky ny teny tao amin'ny bokin'i Mosesy teo anatrehan'ny olona. Ary ao, nisy hitany voasoratra fa ny Amonita sy ny Moabita dia tsy maintsy tsy hiditra ny fiangonan'Andriamanitra,, na dia fotoana rehetra,
13:2 satria tsy nitsena ny zanak'Israely mofo sy rano, ary nanamby an'i Balama hamely azy, mba hanozona azy ireo. Afa-tsy Andriamanitsika nampody ny fanozonana ho tso-drano.
13:3 Ary nitranga fa, rehefa ren'ny olona ny lalàna, dia nisaraka vahiny eo amin'ny Isiraely rehetra.
13:4 ary Eliasiba, ny mpisorona, io asa io, no mpifehy; efa nomena anjara-raharaha momba ny rakitry ny tranon'Andriamanitsika, ary izy dia havany akaiky Tobia.
13:5 Ary nanao ny tenany ho lehibe ho an'ny storeroom, Ary amin 'izany toerana, nisy napetraka teo anatrehany fanomezana, ary ny ditin-kazo manitra, ary ny fanaka, ary ny fahafolon-karena-bary, divay, ary ny menaka, ny ampahany amin'ny Levita, ary ny mpihiralahy, ary ny mpiandry varavarana, ary ny voaloham-bokatry ny mpisorona.
13:6 Fa mandritra izany rehetra izany, Dia tsy tao Jerosalema, satria ao amin'ny amby telo-polo taona faharoa nanjakan'i Artaksersesy, ny mpanjakan'i Babylona, No nahatongavako tany amin'ny mpanjaka, ary nony tapitra ny andro vitsivitsy, Dia nangataka tamin'ny mpanjaka.
13:7 Ary nankany Jerosalema, ary azoko ny ratsy nataon'i Eliasiba ho an'i Tobia, toy izany mba hanao azy ho storeroom tao amin'ny vestibules 'ny tranon' Andriamanitra.
13:8 Ary toa ahy tena ratsy. Ary nanipy ny fanaka tao an-tranon'i Tobia ivelan'ny storeroom.
13:9 Ary nanome toromarika, ary nodiovina indray ny storeroom. Ary nentiko niverina, ho any amin'io toerana io, ny fanaky ny tranon'Andriamanitra,, ny sorona, ary ny ditin-kazo manitra.
13:10 Ary nahatsapa aho fa ny ampahany amin'ny Levita tsy mbola nomena azy ireo, ary samy efa nandositra ho any amin'ny faritra, avy ny Levita, ary ny mpihiralahy, ary ireo izay nanompo.
13:11 Ary nitondra ny raharaha teo anatrehan'ny governora, ka hoy izaho:, "Nahoana isika no nahafoy ny tranon 'Andriamanitra?"Ary novoriko, ary nahatonga azy ireo hitsangana eo ny toby.
13:12 Ary ny Joda rehetra nitondra ny fahafolon-karena ny vary, ary ny divay, ary ny diloilo tany amin'ny firaketana.
13:13 Ary notendrena hitandrina ny trano firaketana, Selemia, ny mpisorona, ary Zadoka, ny mpanora-dalàna, ary Pedaia avy tamin'ny Levita, Ary manarakaraka ireo Hanan, ny zanak'i Zakora, zanak'i Matania. Fa efa voaporofo ny tsy hivadika. Ary noho izany ny ampahany tamin'ny rahalahiny no nomena azy ireo.
13:14 Tsarovy aho, O Andriamanitro, noho io, ary enga anie ianao tsy hamafa ny asa ny fangoraham-po, izay nataoko ho an'ny tranon'Andriamanitro ianareo sy ny lanonana.
13:15 Ary tamin'izany andro izany, hitako, in Joda, ny sasany izay nanosihosy ny milina fanontam-pirinty tamin'ny Sabata, ary izay nitondra amboara, ary ny fametrahana ny boriky enta-mavesatra ny divay, sy ny voaloboka, ary ny aviavy, ary entana samy hafa rehetra, ary izay nitondra ireo ho any Jerosalema tamin'ny andro Sabata. Dia nifandahatra taminy aho, ka dia izy ireo mivarotra amin'ny andro izay navela hivarotra.
13:16 Ary ny sasany Tyro nitoetra tao anatin'ny, izay nitondra hazandrano sy ny zavatra isan-karazany amidy. Ary izy ireo nivarotra ny Sabata ho an'ny taranak'i Joda any Jerosalema.
13:17 Ary nampidiriny ny manan-kaja amin'ny Joda nampianiana, ary hoy izy taminy: "Inona izao ratsy ataonareo, mandoto ny andro Sabata?
13:18 Tsy razantsika manao ireo zavatra ireo, ary toy izany koa ny Andriamanitra nitondra izao loza rehetra izao amintsika sy amin'ity tanàna ity? Ary ianao no nanampy ny fahatezerana mirehitra izay mihatra amin'ny Isiraely amin'ny alalan'ny nandika ny Sabata!"
13:19 Ary nony fa, raha ny vavahadin'i Jerosalema dia nitsahatra tamin'ny andro Sabata, Niteny aho, ary nakatona ny vavahadin'ny. Ary nandidy aho mba tsy hanokatra izany raha tsy taorian'ny sabata. Ary notendreko ny zatovoko sasany eo am-bavahady, mba tsy hisy mitondra enta-mavesatra ao amin'ny andro Sabata.
13:20 Ary toy izany koa ny mpandranto sy ny mpivarotra entana isan-karazany fotsiny sisa ivelan'i Jerosalema, ary indray mandeha indray.
13:21 Dia nifandahatra taminy aho, ary hoy izy taminy: "Nahoana ianareo no mitoetra any an-dafin'ny rindrina fotsiny? Raha manao izany indray, Dia halefako hamely anareo tanana. "Ary dia, hatramin'ny fahiny, intsony izy ireo tonga tamin'ny Sabata.
13:22 Izaho koa niteny tamin'ny Levita, ka izy ireo ho voadio, ka ho tonga mba hiambina ny vavahady, ary mba hanamasinany ny andro Sabata. Ary noho izany koa, O Andriamanitro, Tsarovy aho, ka iantrao aho, araka ny haben'ny famindram-ponao.
13:23 Fa tamin'izany andro izany, Hitako Jiosy sasany naka vady tamin'ny Asdodita, ary ny taranak'i Amona, sy ny Moabita.
13:24 Ary ny zanany niteny ampahany tamin'ny fitenin'i Asdoda, ary tsy mahay mandaha-teny ny teny jiosy, ka dia niteny araka ny fitenin 'ny olona iray na ny iray hafa.
13:25 Ary nataony nampianiana, ary nanozona azy. Ary namely ny sasany ny lehilahy, ary noharatany ny volony, ary nampianiana azy ho an'Andriamanitra izy ireo fa tsy hanome ny zananivavy ho vadin'ny zanakalahin'ireny, ary aza maka ny zanany vavy ho an'ny zanany lahy, na ho an'ny tenany, nanao hoe::
13:26 "Tsy Solomona, mpanjakan'ny Isiraely, fahotana ity karazana zavatra? Ary azo antoka fa, amin'ny firenena maro, tsy nisy mpanjaka mitovy amin'ny azy, ary izy dia malala-masin'Andriamaniny, Ary Andriamanitra nametraka azy ho mpanjakan'ny Isiraely rehetra. Na izany aza anefa dia vehivavy hafa firenena nitarika azy hanota!
13:27 Koa ahoana moa no tsy mankatò, ary hanao izany ratsy lehibe rehetra, mba ho manota amin'Andriamanitsika, ary alao hafa firenena ho vadinareo?"
13:28 Ary ny anankiray tamin'ny zanak'i Joiada, ny zanak'i Eliasiba, ny mpisoronabe, dia Zanaka-in-vinanton'i Sanbala, ny Horonita, ary nahatonga azy handositra ahy.
13:29 Tompo O, Andriamanitra ô, tsarovy tezitra amin'ny mpanao mandoto ny fisoronana sy ny lalàn 'ny mpisorona sy ny Levita!
13:30 Ary noho izany dia nanadio azy ireo tamin'ny olona hafa firenena rehetra, ary nampitoerako ny baiko ny mpisorona sy ny Levita, samy ao ny fanompoany.
13:31 O Andriamanitro, tsarovy aho koa, ny soa, noho ny fanatitra hazo, amin'ny fe-potoana voatondro, ary noho ny voaloham-bokatra. Amen.